Ipropathi ye-Photocatalytic yePropathi yeNano titanium dioxide TIO2
I-Nano-titanium dioxide i-TIO2 inomsebenzi ophezulu we-photocatalytic kwaye inezixhobo ezibonakalayo ezibonakalayo. Ngepropathi ezinzileyo yemichiza kunye nemithombo emininzi yezixhobo, ngoku yeyona photocatalyst ithembisayo. Uhlobo lwe-crystal, lunokwahlulwa lube: T689 rutil ...
Ukusetyenziswa kwe-Antibacterial of Nano Copper Oxide Powder CUO
I-oxide yobhedu i-nano-powder ngumgubo omnyama-mnyama we-oxide oxide kunye nokusetyenziswa okubanzi. Ukongeza kwindima ye-catalysts kunye ne-sensors, indima ebalulekileyo ye-nano-copper oxide yi-antibacterial. Inkqubo elwa iintsholongwane oxide metal kunokuchazwa nje: Phantsi excitation ukukhanya wi ...
Ithemba lesicelo segraphene ye-nitro-doped graphene esebenzayo
Ukuphuhliswa kwamandla acocekileyo nahlaziyekayo sisicwangciso-qhinga esiphambili kuphuhliso lwentlalo noqoqosho lwelizwe lethu. Kuwo onke amanqanaba etekhnoloji yamandla amatsha, ukugcinwa kwamandla kwe-electrochemical kunesikhundla esibaluleke kakhulu, kwaye ikwangumbandela oshushu kuphando lwenzululwazi lwangoku. Njenge ...
Yazi ngokukhawuleza ngamalungiselelo eSilver Nanowires, ukusebenza, iiparameter kunye nesicelo
Baninzi ubuchwephesha obutsha kumzi mveliso wezinto eziphathekayo, kodwa bambalwa abenzileyo. Uphando lwezenzululwazi lujonga ingxaki "ukusuka kwi-zero ukuya kwenye", kwaye iinkampani ekufuneka ziyenzile kukuguqula iziphumo zibe ziimveliso eziveliswa ngobuninzi kunye nomgangatho ozinzileyo. I-Hongwu Nano ngoku i-indu ...
I-Cerium oxide Nanoparticles inokunceda ukuthintela ukwenziwa kweBiofilm kunye neeCaries
Ukuba ukulahleka kweenwele kuyingxaki kubantu abadala, ke ukubola kwamazinyo (igama lesayensi) kukungxaki kwentloko okuqhelekileyo kubantu bayo yonke iminyaka. Ngokwezibalo, izehlo zokungabikho kwamazinyo phakathi kolutsha kwilizwe lam ngaphezulu kwama-50%, izehlo zokungabikho kwamazinyo kubantu abaphakathi kweminyaka ...
Ithemba lesicelo segraphene esebenzayo: i-nitrogen-doped graphene
Ukusasazeka kweNano yeSilivere yeAntibacterial, iMonomer Nano Isisombululo sesilivere, iNano yeSilivere yeCloid
Ukusasazeka kwe-Nano yesilivere ye-antibacterial, isisombululo se-monomer nano-silver, kunye ne-nano-silver colloid zonke zibhekisa kwimveliso enye apha, esisisombululo samasuntswana e-nano-silver asasazeke kakhulu. Iziphumo zayo zokulwa ne-antibacterial ziphezulu kakhulu, kwaye ziyabulala inzalo ziziphumo ze-nano. Ixesha le-antibacterial lil ...
Olunye ulwazi olusisiseko malunga nano colloid yesilivere
Kwixesha laphambi kokubulala iintsholongwane xa i-nanotechnology ingekaphumi, kunzima ukukhuthaza itekhnoloji yesilteribacterial ngaphandle kokugaya umgubo wesilivere, ukusika ucingo lwesilivere, kunye nokwenza izinto eziqulathe isilivere. Ikhompawundi yesilivere kufuneka ilawulwe ngaphakathi kwendawo ethile ...
Umgaqo woKwenza ubushushu beNanodiamonds
Kwi-crystallography, isakhiwo sedayimane sikwabizwa ngokuba sisakhiwo sedayimani yekristale, esenziwa ngokudibana kweeathom zekhabhoni. Uninzi lweempawu ezigabadeleyo zedayimani sisiphumo esithe ngqo samandla obophelelo lwe-sp³ olwenza isakhiwo esiqinileyo kunye nencinci ...
I-nanoparticles yobhedu inokubulala iiseli zomhlaza
I-nanopowder ye-Copper yipowder emnyama emnyama emnyama enezinto ezininzi ezisetyenziswayo. Ukongeza kwindima ye-catalysts kunye ne-sensors, indima ebalulekileyo ye-nano oxide ye-oxide yi-antibacterial. Inkqubo elwa iintsholongwane oxide metal kunokuchazwa nje: Phantsi excitation ukukhanya wi ...
Indima ebalulekileyo yensimbi ye-Molybdenum Mo powder
I-Metal Molybdenum powder, Mo nanoparticles, njengentsimbi ebalulekileyo enqabileyo idlala indima ebalulekileyo kwicandelo lokunyibilikisa isinyithi, ukufumanisa, i-aerospace, amayeza, ezolimo, ii-catalysts kunye neeramics. Okokuqala, isicelo ngentsimbi. Injongo ephambili kukuveliswa kweentlobo ezahlukeneyo ze-molybdenum ...
I-Anticorrosive, i-Antibacterial, Intshayelelo yokulwa ukungcoliswa kweNanomaterial
Ukungcoliswa kwezinto eziphilayo zolwandle kunokubangela umonakalo kwizinto zobunjineli baselwandle, kunciphise ubomi beenkonzo, kwaye kubangele ilahleko enkulu kwezoqoqosho kunye neengozi eziyintlekele. Ukusetyenziswa kwezambatho ezichasayo sisisombululo esiqhelekileyo kule ngxaki. Njengamazwe kwihlabathi liphela ahlawula ngaphezulu ...
Ukuthelekiswa kovavanyo lokufaka ubushushu phakathi kwe-cesium-doped tungsten oxide Cs0.33WO3 iglasi kunye neglasi eqhelekileyo
Ukukhanya kwe-infrared kunefuthe elibonakalayo le-thermal, ekhokelela ngokulula kubushushu obushushu. Iglasi yokwakha eqhelekileyo ayinampembelelo yokugquma ubushushu enokufezekiswa kuphela ngeendlela ezinje ngokufota. Ke ngoko, umphezulu weglasi yokwakha, ifilimu yemoto, izixhobo zangaphandle, e ...